Inkastoo anaga, sameysid si aan u eegno kuwa cadaanka ah. "Noloshu waa dhib badan tahay" 9 waxay jeceshahay in lagu noqdo si loo noqdo 6 iyo 6 waxay kaloo rabaan inay noqdaan 9. Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Nofeembar 5, 2019 11: 00 No Comments
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 18, 2019 3: 00 No Comments
Waxaa loogu talagalay in laga caawiyo beeralayda iyo dadka ku nool wadamada soo koraya, Wakati waa meel la nadiifiyey, oo ay ku shaqeeyso tamarta qorraxda ah oo gacan ka geysan karta in alaabta cusub ee cusub la ilaaliyo. Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Nofeembar 29, 2018 7: 00 No Comments
Milkiiluhu wuxuu siiyaa addoonka walaalkiis Ferréol Beaumont Béliers, oo sidoo kale ah milkiilaha Sainte-Suzanne isla markaana aad u jecel wax ku saabsan botany. Ferréol Beaumont Béliers wuxuu ka dhigayaa inuu noqdo ninkii beerta ka shaqaynayay ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 23, 2018 12: 20 No Comments
Franco Macky Sall, madaxweynaha Senegal, ayaa billaabay mashruuca "High Speed ​​Train" ee waddankiisa, wuxuu ku soo saari doonaa Faransiiska. "Dooddu way furantahay! Laba kiis, ayaa ... Akhri wax dheeraad ah
Bertin Nahum (Afro-Faransiis): 4 ee ugu sarreeya ee caalamiga ah ee caalamiga ah ... "Muxuu ka soo jeedaa Bertin Nahum? Si wargeysyada faransiisku u gudbiyaan jinsiyadooda asalka ah, waxaan ka shakisanahay in maskaxdani aysan ahayn Faransiis asal ahaan. Digniin, kama hadlayo midabka maqaarka, lakiin asal ahaan marka la eego dhalashada »
Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 28, 2017 12: 36 No Comments
Tani waa boostada Jean-Charles oo ku yaal bogga internetka ee wargeyska Ivory Business. Iyo sabab wanaagsan. Muwaadiniintan kacaansada ah ayaa loo ogolaaday markii ugu horeysay ee Faransiisku ku soo laabto ... Akhri wax dheeraad ah
Xasilinta Bulshada ee Mareykanka: Owsley, Kentucky
Ma i xasuusiyaa caruurnimadayda adiguna? Waxay ahayd maalinnimadii, sifiican ayaa loo qoondeeyay, sirta ayaa ahayd sidii loo qalin lahaa kaabsalka
Georges Mc Laurin: calaamad muujinaysa xorriyadda cunsuriyadda "Waa markii ugu horeysay ee Black ah ee loo ogolaado jaamacaddiisa, George Mc Laurin waa calaamad dhabta ah ee xorriyadda cunsuriyadda, sheekadiisa gaarka ah waxay dhiirigelinaysaa"
Mahadnaq mudan ee Marcus Ga die: M - Gavey, ninkan iftiimiyay oo wali ah kombuyuutar, hagaha tusaalaha ah… (Audio)
Feb16 09: 05